Mayelana Nathi - Xuzhou Lena Import Export Co., Ltd.
Ibhodlela Lamafutha E-Olive
Ibhodlela Lamafutha Abalulekile
Ibhodlela le-Reed Diffuser
Uju & Jam Jar
I-Xuzhou Lena Import and Export Co., Ltd., umkhiqizi wamabhodlela engilazi enziwe ngokwezifiso e-China, unolwazi olungaphezu kweminyaka eyi-12 ekuhlinzekeni ngezixazululo zokupakisha engilazi.
Sihlinzeka ngezinhlobonhlobo zamabhodlela okupakisha engilazi, njengamabhodlela eziphuzo, amabhodlela ejusi, amabhodlela obisi, amabhodlela e-condiment, amabhodlela ezimonyo, amabhodlela e-aromatherapy, amabhodlela kawoyela abalulekile, izibambi zamakhandlela, izimbiza zoju, izimbiza zikajamu, izimbiza zekhofi, izimbiza zokugcina ukudla, njll. .
Sineqembu lokuklama eliyingqayizivele elingaklama ibhodlela lokupakisha olifunayo ngokusho kwemibono yakho.Sihlonipha futhi sisekela okwangempela futhi siguqule imibono yakho ibe ngokoqobo.Kuzoba wumlingo onjani lokhu.
Izinto zethu zokusetshenziswa kwengilazi zihlolwe ikhwalithi eqinile, zithobelana namazinga kazwelonke nawokuthekelisa, kanye nokuhlolwa kokusekelwa.Ngesikhathi esifanayo, umnyango wethu wokukhiqiza unohlelo oluphelele lokuphatha ukukhiqiza lokulawula ngokuqinile izindleko ngenkathi ulawula ikhwalithi ukuze ukwandise amamajini enzuzo yakho.
Inkampani yethu futhi inemishini kagesi yokukhipha yonke insimbi yokwenza ukucubungula okujulile kwamabhodlela engilazi.Inqubo yethu ejulile ihlanganisa i-decal, ukuphrinta kwesikrini sikasilika, isitembu esishisayo, isithwathwa, i-sandblasting, ukupenda kanye ne-electroplating, njll. I-oda le-OEM ne-ODM lamukelekile, siyajabula ukuklama noma ukukhiqiza amabhodlela akho angokwezifiso, afana ncamashi nombono wakho nomdwebo.Esifuna ukukwenza ukunikeza isevisi yendawo eyodwa kubo bonke abangani.
Ithimba lethu labadayisi bamazwe ngamazwe linamakhono amahle kakhulu okuxhumana futhi lingaqonda izinkathazo zangempela zamakhasimende ethu.Ngemva kweminyaka yokusebenza kanzima, siye sakha ubuhlobo obuhle namakhasimende ethu futhi sazuza ukwethenjwa kwawo emhlabeni.
Sigcwele ukuzethemba emikhiqizweni yethu futhi singakunikeza amasampula amahhala ukuze uwahlole.Imikhiqizo yethu yengilazi ithunyelwe emazweni nasezifundeni ezingaphezu kwe-100 emhlabeni jikelele.
Siyakwamukela efekthri yethu ukuze uvakashele futhi uxoxisane.
I-Baduan Industrial Park, isifunda sase-Tongshan, iDolobha laseXuzhou, esifundazweni saseJiangsu
Abakhiqizi bebhodlela lamakha abayi-6 abaphezulu emhlabeni jikelele